Betas sidoo kale waxaa loo siidaayay watchOS 4.2.2 iyo tvOS 11.2.5 horumariye | Waxaan ka socdaa mac
Galabnimada Arbacada, Janaayo 3, 2018 waa midda ay Apple u dooratay inay miiska saarto nooca beta ugu horreeya sanadka macOS Sare Sierra 10.13.3, IOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, iyo tvOS 11.2.5 kuwa horumariya. Xaaladdan oo kale waa inaan dhahnaa hagaajinta la hirgeliyey waxay diiradda saareysaa hagaajinta khaladaadka iyo horumarka caadiga ah ee xasilloonida nidaamka.
Apple maahan wax dhib badan xilligan waxayna sii deyneysaa noocyo leh sixitaanno yar yar oo loogu talagalay horumariyeyaasha si ay u sii wadaan tijaabada Ma hubno inay jiraan warar muuqda xagga nidaamka nidaamka ama muuqaal cusub, laakiin waqtiga la sii daayay, ma jiro horumariye ka hadlaya isbeddelada muuqda ee noocyadan watchOS iyo tvOS.
Apple Watch iyo Apple TV waa laba ka mid ah wax soo saarka sida aadka ah uga faa’iideystay ciidahan xaga iibka, gaar ahaan Apple Watch tanina waxay ka dhigeysaa dadaalka injineerada ku jira nidaamka qalliinka inay sii weynaadaan si aysan u dhicin ama ogaadaan dhibaatooyinka. Ragga ka socda Cupertino waxay sii wadaan hagaajinta OS-ga kala duwan ee la heli karo: tvOS, watchOS ma aha kuwa laga reebay sidoo kale waxay ku jiraan gacanta horumariyeyaasha si ay nidaamka u saaraan. Noocyada dadweynaha ee kuwan ayaa la sii deyn doonaa saacadaha soo socda, sidaa darteed kuwa doonaya inay rakibaan oo aan lahayn akoon rasmi ah oo horumarineed waqti dheer ku qaadan mayso in la sameeyo.
Xusuusnow taas gudaha kiiska watchOS ma hayno beta beta laakiin macOS, iOS iyo tvOS waxaan haysanaa ikhtiyaar aan ku rakibno betaskan dadweynaha illaa iyo inta aan ka diiwaan gashan nahay barnaamijka horumarinta. Iyada oo ay taasi jirto, taladeenna ku saabsan noocyadan beta waa in laga fogaado noocyada beta haddii ay ku daraan wax kasta oo fashilaad ah ama iswaafaq la'aan agabkeenna ama codsiyada ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Store » Betas sidoo kale waxaa loo sii daayay watchOS 4.2.2 iyo horumariyayaal tvOS 11.2.5